Hollywood Weekend Boxoffice Report: Filimka The LEGO Movie 2: The Second Part oo kaalinta kowaad la wareegay – Filimside.net
Hollywood Weekend Boxoffice Report: Filimka The LEGO Movie 2: The Second Part oo kaalinta kowaad la wareegay
Filimka Cartoon-ka ah The LEGO Movie 2: The Second Part ayaa todobaadkan la wareegay hogaanka USA Boxoffice asigoo keenay $34.40m sedexdiisa maalmood ugu horeyso balse waa ganacsi gaabis ka muuqdo madaama mashruucaan uu taxane yahay sidoo kalena la saaray 4,303-tiyaatar qiyaas ahaan waxaa laga rajeenayay inuu keeno $50m ilaa $55m inta u dhaxeyso.
Filimka Filimka The LEGO Movie 2: The Second Part wuxuu ganacsi ahaan ka hooseeya taxanahan qaybtiisa kowaad The Lego sanadii 2014 wuxuu keenay $69m sedexda maalmood ugu horeyso sidoo kalena qaybtiisa labaad The Lego Batman oo 2017 la daawaday wuxuu keenay 53m sedexda maalmood ugu horeyso sidaa darteed taxanahan Warner Bross iska leedahay si gaabis weyn ka muuqdo ku furmay.
Sidoo kale filimka Filimka The LEGO Movie 2: The Second Part suuqyada caalamka wuxuu ka keenay $18.1m halka qaybtiisa kowaad shan sano ka hor soo xareeyay $18.4m mudo sedex maalmood ah suuqyada caalamka.
Dhinaca kale Shirkada Paramount filimkeeda What Men Want ayaa kaalinta labaad USA Boxoffice kasoo galay wuxuuna keenay $19m wuxuuna la yimid bilaabasho wanaagsan filimkan $20m lagu qarash gareeyay oo ay wada jilayaan Taraji P. Henson, Aldis Hodge iyo Tracy Morgan.
Shirkada Summit Entertainment filimkeeda Cold Pursuit ayaa keenay $10.80m sedexdiisa maalmood ugu horeyso USA Boxoffice waana bilaabasho marka loo fiiriyo in 2630 tiyaatar laga daawanayo.
Fadlan hoos kaga bogo todobaadkan sedexda maalmood ugu horeyso (Weekend) 10-ka filim lacagaha ugu badan USA Boxoffice kasoo xareeyeen kuna xeen daaban Febraayo 8-10, 2019:
1. The LEGO Movie 2: The Second Part todobaadkan sedexda maalmood ugu horeyso wuxuu keenay $34.40m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $34.40m mudo 3-maalmood ah uu tiyaatarada saaran yahay.
2. What Men Want todobaadkan sedexda maalmood ugu horeyso wuxuu keenay $19m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $19m mudo 3-maalmood ah uu tiyaatarada saaran yahay.
3. Cold Pursuit todobaadkan sedexda maalmood ugu horeyso wuxuu keenay $10.80m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $10.80m mudo 3-maalmood ah uu tiyaatarada saaran yahay.
4. The Upside todobaadkan sedexda maalmood ugu horeyso wuxuu keenay $7.22m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $85.80m mudo 5-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
5. Glass todobaadkan sedexda maalmood ugu horeyso wuxuu keenay $6.42m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $98.47m mudo 4-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
6. The Prodigy todobaadkan sedexda maalmood ugu horeyso wuxuu keenay $6m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $6m mudo 3-maalmood ah uu tiyaatarada saaran yahay.
7. Green Book todobaadkan sedexda maalmood ugu horeyso wuxuu keenay $3.56m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $61.50m mudo 13-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
8. Aquaman todobaadkan sedexda maalmood ugu horeyso wuxuu keenay $3.30m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $328.54m mudo 8-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
9. Spider-Man: Into the Spider-Verse todobaadkan sedexda maalmood ugu horeyso wuxuu keenay $3.04m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $179.82m mudo 9-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
10. Miss Bala todobaadkan sedexda maalmood ugu horeyso wuxuu keenay $2.72m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $11.86m mudo 2-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
F.G: Filimka Hindiga ah Ek Ladki Ko Dekah Toh Aisa Laga oo ay wada jilayaan Anil Kapoor, Sonam Kapoor iyo Rajkumar Rao ayaa $250,000 ka keenay gusaha USA Boxoffice todobaadkiisa labaad sedexda maalmood ugu horeyso waxaana laga daawanayaa 193-tiyaatar asigoo kaalinta 29-aad kaga jiro USA Boxoffice todobaadkan, wuxuuna wadarta guud mudo 10-maalmood ah soo xareeyay $1.04m.
Todobaadka Dambe Aflaanta Tiyaatarada USA Boxoffice Ku Cusub:
Shirkada Blumhouse filimkeeda Happy Death Day 2U ayaa todobaadka dambe masraxa ku cusub waxaana la saari doonaa 3,000 tiyaatar gudaha USA ayadoo ay wada jilayaan Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu, Suraj Sharma, iyo Ruby Modine waana qaybta labaad taxanaha cabsida badan Happy Death Day (2017).
Shirkada New Line filimkeeda Isn’t It Romantic oo ay hogaamiye ka tahay Rebel Wilson ayaa isagana masraxa ku cusbaan doono todobaadka dambe waxaana la saari 3,300 tiyaatar.
Xidigaha Bollywoodka Kuwaaso Aan Ka Xishoon Inay Isku Dhex-Shumiyaan Bulshada Dhaxdeeda April 22, 2019
Xidigahan Bollywoodka Kuwaaso Aan Wax Badan Ka Yarayn Eedayaashooda Aabahooda U Dhaxa (Qaybta 2aad) April 22, 2019
Xidigo Kuwaaso Kusoo Caan-Bixi Lahaa Aflaamtan Laakiin Aysan U Suurto-Gelin (Qaybta 1aad) April 22, 2019